Duufaano Khasaaro Gaystay oo ka oo ka jira Puntland iyo Somaliland – Daily Som
By Staff on May 18, 2018 No Comment
Duufaano iyo dabaylo maalmahaan oo dhan laga digayay ayaa laga soo sheegayaa xeebaha waqooyi ee soomaaliya kuwaas oo ay bar bar socdaan Roobab mahiigaan ah.
sida ay wararku nagu soo gaarayaa waxaa jiro khasaare kala duwan oo soo gaaray deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyo Jamhuuriyadda sheegtay in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ee Somaliland, 14 kii saac ee ugu dambeeyay sida ay baahisay qaramada Midoobay.
Labo ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen Gobalka Bari ka dib markii ay daadad la tageen, sida uu sheegay Agaasimaha Guud ee Wasaarada Arimaha Gudaha Maamulka Puntland Maxamed Cali Nuur Juba.
Dhanka kalana Hirar waawayn oo badda laas Qoray ka soo kacay ayaa dibadda u soo saaray oo burburiyay ugu yaraan toban doomood waxaana jira walaac laga qabo in ay biyuhu galaan guryaha sida uu BBC-da u xaqiijiyay, Badhasaabka badhan u jooga Somaliland Cali Xuseen Saalax.
Hay’adda cunnada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee FAO ayaa sheegtay in la filayo in ay mahiigaannada ka da’aya qaybo ka mid ah Puntland iyo Somaliland ay ka sii daraan labada maalmood ee foodda inagu soo haya.
Dhanka kalana waxaa hoos u dhacay roobabka ka da’aya Juba, Shabeelle iyo waliba dhulka buuralayda ah ee Itoobiya, Daadad iyo fatahaado badan oo arrintaas ka dhashay ayaana khasaare badan ka gaystay deegaanno badan oo Soomaali ah.
Duufaano Khasaaro Gaystay oo ka oo ka jira Puntland iyo Somaliland added by Staff on May 18, 2018